Momba anay | Yueqing Tailei Electric Co., Ltd.
Yueqing Tailei Electric Co., Ltd. dia iray amin'ireo mpanamboatra manam-pahaizana manokana momba ny stabilizer Voltage manana traikefa mihoatra ny 15 taona.Ny fanamafisam-peo, fanovana , mpiaro voltatera ary mpanara-maso feeder vibratory no vokatra lehibe ampiasainay.
TAILEI dia manana ekipa R&D matanjaka ary miaraka amin'ny Mpiasa 150 ary maherin'ny 8000 toradroa metatra mpamokatra metatra, miaraka amina toerana fanamboarana mandroso indrindra ao anatin'izany ny PCB, Transformer, Relay, Tooling, injection Plastika, Sheet Metal, Silkscreen, Workshop an'ny Assembly, ary Andininy 6 Assembly. Ny orinasanay dia afaka manolotra vokatra misy kalitao avo lenta amin'ny vidin'ny fifaninanana. Manana ny atrikasa maoderina ary fitaovana famokarana mandroso, ankoatr'izay dia mampiditra ny teknolojia hatrany amin'ny fomba tsara isika, manamboatra tsy tapaka ny asa tanana. Ny zava-dehibe dia ny ananantsika 5 ekipa matihanina injeniera ary ny laboratoara natokana hijerena ny vokatra .Mampiasa vola sy angovo lehibe izahay amin'ny fanafarana sy fampivoarana ny tsipika vokatra mandroso sy ny teknolojia fitsapana ho an'ny fifehezana kalitao, izay ahazoana ny fifampitokisana avy amin'ny mpanjifanay.
Ny vokatra tokana rehetra dia natao hanamarinana ny asany faratampony hahatonga ny mpanjifanay mahazo aina amin'ny fampiasana azy. Manao fikarohana eny an-tsena izahay, mandinika tontolo manodidina ny fampiasana, manentana ny zavatra hitanay ao amin'ny laboratoara, ary mizaha azy alohan'ny handefasana azy eny an-tsena. Mamelombelona ny hevitry ny olona momba ny hery madio isika ary mahatratra dingana vaovao isan-taona.
Noporofoinay fa tena tsara izy ireo nanompo ny mpanjifantsika hatramin'ny 35 taona lasa. Ny fikirizanay sy ny tsy fitovizan'ny serivisintsika dia manome fahatokisan-tena lehibe ho anay: hatramin'ny androany dia efa manome vokatra ho an'ny mpanjifa 700 mahery avy amin'ny firenena 95 manerantany izahay.
Miaraka amin'ny famolavolana, fitrandrahana ary famokarana mifandraika amin'ny fizotran'ny asa, mahazo laza tsara avy amin'ny mpanjifa izahay. ISO9001: 2008 ary mahazo tombony amin'ny CE, PCT ary ROSH, SONCAP, SASO .Manolotra ihany koa ny serivisy OEM & ODM matihanina izahay mba hanomezana fahafaham-po ireo takiana samihafa amin'ny mpanjifanay. Izahay dia manizingizina amin'ny fanofanana mpiasa, mamolavola vokatra vaovao mifototra amin'ny teknolojia sy manompo ho an'ny fiaraha-monina. Maniry izahay fa afaka manangana ho avy mahafinaritra miaraka aminareo.
© Copyright - 2010-2020: Voatahiry ny Zo rehetra. Tips - Vokatra asongadina - Sitemap - Toerana finday Fanamafisam-peo ho an'ny trano rehetra, Fanamafisana ny dizitaly ho an'ny Ac, 2kva Voltage Stabilizer, Voltage Stabilizer ho an'ny amplifier, Voltage Stabilizer 5000va, 4kva Voltage Stabilizer, Vokatra rehetra